मुहार फेरेको केपिलासगढी गाउँपालिका ! - सुनाखरी न्युज
Posted on: April 6, 2022 - 7:03 pm
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै देशभरी स्थापित भएका स्थानीय तहमध्ये खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको केपिलासगढी गाउँपालिका पनि एक हो । आफैमा विकासको दृष्टिले पिछडिएको खोटाङ, जसको उत्तरी बेल्टका तत्कालिन सातवटा गाविसहरु क्रमशः फेदी, खार्तम्छा, बास्पानी, बाक्सिला, सप्तेश्वर, दिप्सुङ र सुङ्देल समेटेर बनाइएको केपिलासगढी गाउँपालिका साँच्चिकै प्रकृतिको अनुुपम उपहार हो । यस क्षेत्रमा राईहरुको बाहुल्यता रहेतापनि क्षेत्री, बाम्हण लगायत सबै जातजातिहरुको विविधतापूर्ण बसोबास रहेको छ । यस क्षेत्रमा रावा, रेणु जस्ता धार्मिक तथा प्राकृतिक महत्वका निरन्तर बहने खोलानाला, ऐतिहासिक केपिलासगढी, विभिन्न रमणीय प्राकृतिक स्थलहरु, सानो हलेसीधाम लगायत चण्डीनाच जस्ता सांस्कृतिक पक्षहरु साथै संकटापन्न अवस्थामा पुगेको कोयी भाषा समेत यहाँको आकर्षणको विषय हो । यसरी हेर्दा प्रकृतिमा जस्तै संस्कृतिमा पनि यो गा.पा.को गरिमा उत्तिकै रहेको पाइन्छ ।
यो केपिलासगढी क्षेत्र सदरमुकाम भन्दा निकै टाढा भएको कारण तत्कालिन शासकका आँखामा पर्न नसक्दा विकासको दृष्टिले पछौटेपन व्यहोर्नु परेको तितो यथार्थ यहाँका जनसमुदायको गुणासो रहँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा संघीयता आएसँगै हाम्रो क्षेत्रमा पनि आशाका किरणहरु पलाएको भनेर उनिहरु भन्ने गर्दछन् । अहिले नयाँ संरचना अनुरुप यस केपिलासगढी गा.पा.का प्रथम निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कार्र्याकाल सकिनै लागेको छ यसै सन्दर्भमा केपिलासगढी गा.पा.को नेतृत्वमा को थियो र नेतृत्वले जनअपेक्षालाई के कति सम्बोधन गर्न सक्यो त भनेर पर्गेल्ने जमर्को गरिएको छ ।
पाँच वर्षसम्म केपिलासगढी गा.पा.का जनताको आशा र भरोसा बनेर बसेका गा.पा. अध्यक्ष कृष्णकुमार राई नेकपा एमालेका जुझारु तथा सशक्त युवा नेता हुन् । उहाँको नेतृत्वको टिमले विजय गरेसँगै यस गा.पा.मा विकासको लहर आएको र अब यो निरन्तर चल्ने आशा यहाँका जनसमुदायको रहेको छ । अहिले अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईको नेतृत्वको टिमले लगभग पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेको अवस्था छ ।अर्को निर्वाचनको मिति तोकिदै गर्दा वर्तमान नेतृत्व र टिमप्रति रहेको जनधारणालाई आत्मासाथ गर्दै यस गा.पा.को संक्षिप्त समिक्षा गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।
यतिबेला केपिलासगढी गा.पा.को मुहार हिजोको तुलनामा उज्यालो भएको छ । आशाका दीपहरु प्रज्वलन भइरहेका छन् । वास्तवमा पाँच वर्षमा केपिलासगढी गा.पा.ले गा.पा. अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईको नेतृत्वमा मुहार फेरेको हामी सबैले अनुभुत गर्न सक्छौँ, जो कोही आएर हेर्दा देख्न सक्छौँ । यहाँका नागरिकहरुले यो नेतृत्व र नेतृत्वको टिमबाट अपेक्षा गरेजस्तै सेवा सुविधा र अवसर मात्र पाएनन्, अझ त्यो भन्दा बढी जो अपेक्षा नै गरिएको थिएन अर्थात यो नेतृत्वले जनताले परिकल्पना नै गर्न नसकेका विषय र क्षेत्रमा समेत सेवा सुविधा र अवसर सिर्जना गरेको र त्यसबाट यहाँका नागरिकहरु लाभान्वित भइरहको अवस्था छ । यसरी सेवा र सुविधा पाउँदा एकातर्फ उनिहरु मख्ख छन् भने आउँदै गरेको निर्वाचनले कस्तो नेतृत्व ल्याउला भन्ने चिन्तामा उनिहरु रुमलिएको बताउँछन् । उनिहरुको चाहाना भने फेरिपनि कृष्णकुमार राई जत्तिकै सशक्त, युवा, जुझारु, जनप्रिय र जनभावना अनुकुल काम गर्ने अध्यक्ष चाहिन्छ भन्ने हो । पाटिका कार्यकर्ता मात्र नभई समग्र गा.पा. निवासी नागरिकहरु यो नेतृत्वप्रति सन्तुष्ट छन् र उनिहरु यो नेतृत्वको खुलेर प्रशंसा गर्न आनाकानी गर्दैनन् ।
जनताका समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर आँफै सक्रिय रुपमा सहभागी भई समाधान खोज्ने अध्यक्ष कृष्णकुमार राईको कार्यशैली नै जनताका लागि रुचिपूर्ण र प्रियकर भएको केपिलासगढी गा.पा. निवासी जनताहरुको धारणा छ ।
उनिहरु थप्छन्, चुनावको नारा बनाउन या त विपक्षि दल भएकै कारण विरोध जनाउनका लागि कृष्ण कुमार राई र उनको निर्वाचित टिमप्रति आलोचनात्मक स्वर सुनिएला तर वास्तबमै हाम्रो गा.पा.ले पाएको वर्तमान अध्यक्ष विकासप्रेमी र जनप्रिय भएको विषयमा दुईमत छैन । उहाँको कार्यकालमै हामीले वास्तबिक रुपमा राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाको अनुभव ग¥यौँ र सुशासनको अनुभूति पनि । यो विषयमा हामी खुलेर हाकाहाकी भन्न सक्छौँ। निष्पक्ष रुपमा विश्लेषण गर्न सक्नु पर्दछ, केपिलासगढी गा.पा.को वर्तमान टिमले देखिने गरी विकास निर्माण गरेको छ त्यसमा पनि गा.पा. अध्यक्ष कृष्णकुमार राईको कुशल नेतृत्व उहाँको कुशल नेतृत्वमा रहेको टिम- उपाध्यक्ष हिराकुमारी वन (गिरी), वडाध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, वडासदस्यहरु लगायत कर्मचारी तथा नागरिकहरुको उच्च भूमिका रहेको कुरा नकार्न सकिन्न ।
विकाशको पहिलो आधार भौतिक पूर्वाधारलाई नै मान्नु पर्दछ । देशका हरेका ठाउँमा रहेका स्थानीय तहमा अझै पनि प्रशासकीय भवन छैन । चित्राको छानामुनी बसेर कर्मचारीले सेवा दिनु परिरहेको छ । यस केपिलासगढी गा.पा.मा भने सानदार प्रशासकीय भवनको निर्माण भएको छ । यो मात्र पूर्ण हैन तथापी यो यस ठाउँका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।
यस्तै अर्को ठूलो उपलब्धि हो, गापालाई सडक सञ्जाल मार्फत लोकमार्ग हुँदै सदरमुकाम दिक्तेल र राजधानी काठमाण्डौँ सम्मको सहज यात्राका लागि पूर्वाधार तयार गर्नु । हुन त अहिले कच्चि सडक छ तर कच्चि सडकका अलवा तापखोलामा बनेको पक्की पुल भने युगौँ देखि पैदल यात्रा गरेर सास्ती भोगी रहेका जनतालाई राहत दिने पहिलो आधार बनेको छ । जसले बर्खा याममा समेत यहाँका जनतालाई आवाज-जावातमा सहजता भएको छ । यसका साथै गा.पा. भित्रका वडा र गाउँबस्ती जोड्ने सडकहरु थुप्रै बनेका छन् । त्यस्ता सडकहरुमा बाक्सिला-जाल्पा सडक, बाक्सिला बहने पोखरी सडक, बाक्सिला फेदी हुँदै भोजपुर जोड्ने सडक, बाक्सिला-बोबु -सुङ्देल हुँदै साल्पा जोड्ने सडक लगायत टोल-टोलमा पु¥याइएका सडकहरु पर्दछन् । ग्रामिण जनजीवनलाई सबै क्षेत्रको विकास र सुविधा का लागि पूर्वाधारको काम गरेका पाइन्छ ।
यस्तै अर्को महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकासको रुपमा बाक्सिला बजारको ट्रष्ट निर्माण पनि हो । वषौँ देखि चित्राको कटेरामा पानी, हावाहुरी सहँदै बजारको अस्तित्व जोगाइरहेको यस बजारले ट्रष्ट निर्माण भएसँगै सिंगै केपिलासगढी गा.पा.को गरिमा बनेर बस्न पाएको छ ।
यस्तै अन्य थुप्रै देखिने र नदेखिने अनेकौँ विकास निर्माणका कार्यहरु यस गा.पा.ले गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा विजुली बलेको बर्षौँ बित्दा पनि यहाँका जनता कुपी र सलेदोको भरमा बस्नु परेको थियो । अहिले आएर यस गा.पा.मा केन्द्रिय विद्युत् विस्तार भइसकेको छ भने थप नपुगेका क्षेत्रमा विद्युत् पु¥याउने प्रक्रिया अगाडी बढाइरेको अध्यक्ष राई बताउँछन् । यस्तै यस गा.पा.का जनतालाई खानेपानी व्यबस्थाका लागि अनेकौँ योजनाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । उदाहरणको रुपमा बाक्सिला बजारको खानेपानी व्यबस्थालाई लिन सकिन्छ । गाउँ गाउँमा खानेपानीका कति योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।
केपिलासगढी गाउँपालिकाको शैक्षिक उन्नयनका लागि पनि अध्यक्ष राईको नेतृत्वले थुप्रै कामहरु गरेको पाइन्छ । विद्यालयको भौतिक सुधार गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गतसाना ठूला गरी २४ वटा विद्यालय भवन निर्माण निर्माण भएका छन् । गा.पा.का प्रत्येक मा.वि.लाई नमूना मा.वि. बनाउने, प्रत्येक विद्यालयलाई बालमैत्री बनाउँने साथै प्रत्येक विद्यालयलाई सञ्चारमैत्री बनाउने प्रयास स्वरुप थप्रै कार्यहरु भएका र भइरहेका पनि छन् । विद्यालयमा शिक्षक तथा कर्मचारीको अभाव नहोस् भनेर सो क्षेत्रमा पनि काम भएको देखिन्छ भने नीतिअनुरुप शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधामा समेत कुनै कन्जुस्याई गरिएको देखिदैन । माध्यामिक विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने देखि प्रत्येक विद्यालयलाई अन्य शैक्षिक सामग्रीका अलवा ग्याँस चुलो वितरण गर्ने कार्य पनि भएको छ ।
यस गा.पा.का कृषक तथा श्रमजिवी वर्गको उत्थानका लागि अर्थात सर्वसाधारण नागरिकहरुको जीवनस्तर उकास्नका लागि केही साना सिंचाई आयोजनाहरुको निर्माण भइसकेको र केही निर्माणधिन अवस्थामा रहेको पाइन्छ । यस्तै उनिहरुलाई व्यवसायिक बनाउन अनेकौँ प्रोत्साहन कार्यक्रमहरु भई रहेका छन् । अलैचीखेति लगायतका नगदेवाली, अन्नबाली, फलफुल तथा पशुपालन कार्यका लागि कृषकहरुलाई पालिकाले कुनै न कुनै रुपमा सहयोग पु¥याइरहेको छ ।
अर्को उपलब्धीका रुपमा बाक्सिलामै भएको वाणिज्य बैंकको स्थापनालाई पनि लिन सकिन्छ । यस कारण अब पैसा जम्मा गर्न र झिक्नका लागि यहाँका जनताले सदरमुकाम धाउने सास्ती खेपिरहनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यस्तै केपिलासगढीमा एन.टि.सी. को टावर स्थापना भएको छ, जसले यहाँका नागरिकको सञ्चारमा सहज पहुँच भएको कुरालाई नकार्न सकिदैन ।
यहाँका जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथामिकतामा राखेर गा.पा.ले अनेकौँ प्रयासहरु गर्दैँ आएको पाइन्छ । बाक्सिलामा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । यो हस्पिटल निर्माण कार्य चाँडै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कोरोना जस्तो महामारी अन्य रोगहरुबाट नागरिकहरुलाई सुरक्षित बनाउने दायित्वमा पनि गाउँपालिका चुकेको छैन । वडा वडामा स्वास्थ्य चौकी भवनहरु निर्माण भएका छन् र त्यहाँबाट नागरिकहरुले प्रभाबकारी सेवा पाइरहेको अवस्था छ । गा.पा.का सातै वडामा महिला प्रसुती गृह निर्माण समेत गरिएको छ । उपचार नपाएर नागरिकले मर्नु नपरोस् र समयैमा विरामीलाई हस्पिटलसम्म पु¥याउन सकियोस् भनी एम्बुलेन्सको व्यबस्था गरिएको छ । नागरिककै लागि गरिएको हो । गा.पा. अध्यक्ष हुन नपाउँदै पँजेरो खरिद गर्ने जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने हो भने यहाँका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राई जनताप्रति पारिवारिक भावनाले सेवा गर्न तल्लिन रहेको स्पष्ट हुन्छ । उहाँले पँजेरो चढ्ने सपना भन्दा जनता बचाउने सपना देख्नु भयो र अहिले त्यो साकार पनि भएको छ ।
यसैगरी यहाँका महिला, दलित, अपाङ्ग, जेष्ठ नागरिक तथा पिछडिएका क्षेत्र र विपद् पीडित नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन अनेकौँ कामहरु ग.पा.ले गरेको छ । उनीहरुको ज्ञान, सीप, क्षमता विकास तथा सामाजिक सुरक्षाका लागि अनेकौँ कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । यसरी नागरिकहरुलाई व्यबसायिक बनाई जीवनस्तर उकास्न उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम साथै हौसला बढाएकोले केपिलासगढीबासीको वर्तमान नेतृत्वप्रति सदैव सकरात्मक धारण रहेको पाइन्छ ।
यसरी गा.पा.का सातैवटा वडाका जनताको सर्वाङ्गीण विकासका लागि हरेक क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्व र प्राथामिकतामा राखेर गा.पा.को नेतृत्वले काम गरेको स्थानीयबासीको धारणा रहेका पाइन्छ । यहाँ अन्य स्थानीय तहको तुलनामा पनि धेरै कामहरु भएको छ तर पूर्ण भने नभएको विषयमा नेतृत्वले समेत स्वीकार गरेका छन् । जे होस् सबै क्षेत्रको विकासका लागि आधार तयार भएको छ । यस प्रकारको भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रका वर्तमान नेतृत्वले आशाका किरणहरु छर्दै केपिलासगढीको मुहार फेर्न सफल भएको हामी सबैले देख्न सक्छौँ । अबको नेतृत्व पनि यस्तै र यहाँका जनताको खुसी र समृद्धिका लागि होस् -शुभेच्छा ।
“झकझक्याउँछ घरिघरी; भिरपाखामा फुल्ने सुनाखरी !”